Hery - Tsiky dia ampy | Izaho sy ny ahy | 10
Enregistrer-na ny feo avoakann'ny ordi
2011-06-07 @ 21:22 in Izaho sy ny ahy
Tamin'ny nametraka Windows 7 tamin'ilayyy matosy aho roa taona lasa izay dia falifaly hoe tonga dia hitann'ny windows7 daholo ny pilotes-n'ny peripheriques rehetra (Audio, Video, sns). Nandeha tsara tokoa ilay izy, tsy nisy olana mihitsy. Fa afak'omaly nisy hira tiako no-enregistrer-na mivanntana tamin'ny internet dia tsy hitako ny fanaovana azy. Gaga aho fa tsy nisy capteur-na feo avy amin'ny carte son intsony ny windows7. Rehefa nijerijery tamin'ny google dia nahita soso-kevitra maromaro. Nisy niteny hatramin'ny hoe mampiasa fiche jack mivoaka amin'ilay sortie carte son dia averina amin'ilay entree carte son ihany, karazana loop izany.
Fa ny nahavaha ny olana dia nitady pilote compatible windows 7. Tadidididiko hoe Realtek ilay carte son dia nahita pilote version farany aho dia avy hatrany dia nety. Amin'izao dia hitako ao amin'ny lisitry ny feo azo raisina ny fe avy amin'ny carte son. Ho afaaka haka feo maromaro amin'izay.
Asa koa na mety hisy fiantraikany amin'ny hatsaran'ny feo rehefa manao hira ny fisian'io pilote original io.
2011-06-02 @ 10:02 in Izaho sy ny ahy
Tsy nohavaoziko ny licence windows fandoako isam-bolana ao amin'ny Ovh.com ndroany. Isambolana, ho an'ny serveur kimsufi iray dia nandoa 36 eur HT aho efa ho telo taona izay nametrahana ny DJ radiovazogasyy. Tsy maintsy windows ilay izy satria mbola tsisy equivaalent amin'ny Linux... Sady novidina 240 eur ilay logiciel DJ tamin'izany ka mbola tsyy azo ariana. Fa androany dia tsy nohavaoziko intsony ilay windows serveur satria nety ihany ny fikafika gasy.
Tamin'ny roa volana lasa aho dia nisy niteny hoe afaka manome licence-na windows serveur 2008 MLA amin'ny vidiny mirary. Tsy mamela ny hametraka licence toa izany amin'ny serveur-ny nefa ny kimsufi ao amin'ny OVH. Ny fika izany dia mamorona virtual machine iray ao amin'ny serveur foibe, dia atao Kvm dia iny no asiana windows server 2008 hahafahana mametraka an'ilay licence. Natao ny andrana dia nety tsara nandritra ny iray volana. Nisy fotoana fotsiny ni-crash ilay VM ka nila intervention ni-redemarrer azy. Nesoriko ary ilay license tamin'ilay serveur kimsufi dia nasiana Proxmox dia nampidirina ho node-n'ilay serveur foibe. Nandramana nafindra tao amin'ilay node ny windows 7 tao amin'ilay foibe. Adin'ny 3 no namindrana azy fa tafafindra ihany, niaraka tamin'ny disk roa. Nisy olana kely ny reseau satria kay niova maaachine ilay VM dia niova IP ihany koa. Rehefa nalefa dia nety tsara ary io izy misy ny #scrabl ho an'ny karajia.org io.
Hitako tapatapaka matetika ny rvg vokatr'ilay ao amin'ny VM kanefa aleo amin'izao fa mitady fika hi-gerer-na ny fahatapahana.
Olana eto amin'ny serasera
2011-05-18 @ 18:32 in Izaho sy ny ahy
Misy olana kely ny serasera amin'izao fotoan izao. Eo am-panamboarana azy aho amin'izao.
Inona ilay olana?
Efa nalefako ihany hoe manamboatra ny API ho a'ny serasera aho amin'izao. Eo amin'ny resaka authorization indrindra aho no nahita fa hay tranainy ilay fitaovana ao amin'ny vavahady login.serasera.org
Dia nohavaozina iny fa tsy afaka niandry. Rehefa nohavaozina nefa iny dia tsy nifandray tamin'ny vavahady intsony ny sites rehetra. Vokany, tsy afaka mampiasa solonanarana na aiza na aiza.
Amin'izao dia efa manimboka mivha ny olan amin'ny sites sasany. Afaka 1/2 ora eo dia mety hivaha tanteraka.
Matoa aho nijaly sy maty sy nasandratra ho olontsambatra i JPII...
2011-05-08 @ 19:45 in Izaho sy ny ahy
Hira anakiray azo atao amin'ny Karemy sy fiandrasana ny Paka ity anakiray ity. Matoa aho nijaly sy maty. Mampiseho ny anton'ny fanoloran-tenan'i Jesoa sy ny fandreseny. Nahafinaritra ahy ny nilalao "effets" vitsivitsy tamin'ilay video, mety tsy nivoaka tsara fa rehefa manana ordinatera matanjaka aho mety hilay ihany. Ity ary ilay Video...
Getting it out : manala azy
2011-05-01 @ 21:00 in Izaho sy ny ahy
Nampidiriko tato amin'ny blaogy ity video ity fa nijanona ela tato anaty ordi tato. Tamin'ny telo taona lasa izy izay, raha tsy diso aho, no nanaovako azy ity. Nisy bandy izay niara-nipetraka taminay dia tsy mahay mahandro vary hono izy. Dia nanao ity video ity aho, izay tsy hitany akory, nanandrana izany hoe fomba fandrahoana vary araka ny maha Malagasy :-)
Aza mieritreritra hoe "tutorial" fandrahoana vary io... fa mba manala azy fotsiny. Ialana tsiny ny korontana mety ho hitanareo ao anatiny ao. Ataovy mahafa-po fotsiny ny mieritreritra hoe efa 3 taona lasa io farafaha haingany... izany hoe efa mba nivoatra nahavidy fihogo, sy nahabango volo aho.
Farany, ilay mozika dia nampidirina taty aoriana. Hitako nitendritendry piano teto i Aina dia nalaiko feo... dia nampidiriko niaraka tamin'ilay video. Aza omena tsiny fa efa kely sisa i leiry dia hahay lol.
Ity ilay video fa lava loatra... hamoaka video clip hiram-pivavahana ihany aho rehefa avy eo ka.
«Mialoha 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32 33 34 Manaraka»